Manoloana ny fandravana fotodrafitrasa tsy misy fifampiresahana sy fifampidinihana ao anatin’ny gare routière Aranta dia mitaky ireo mpampiasa ny zotra nasionaly ny hanehoana azy ireo ny taratasy nahazoan’ireo olona manamboatra manao izany. 24 septembre 2020
Manana olona afaka mitantana ny gare routière Aranta, araka ny tokony ho izy izy ireo. Nambaran’izy ireo fa terena ampandalovina amin’ny gare routière ny razana ankehitriny ary akana vola 9 000Ariary. Misy mandalo eo ary adiny iray vao tafavoaka, ka ny olona efa nidonam-pahoriana mbola omena olana hafa ihany koa.
“Tsy mamotika box fa mitondra fanatsarana izahay hoy ireo koperativa. Fanatsarana no ataonay satria ny box dia natao hampiasain’ny koperativa tsirairay. Tsy nisy fanatsarana mihitsy hatrizay tsy manao fanorenana vaovao izahay fa manatsara ny efa misy”, hoy izy ireo.
Zon’ny mpanjifa ny raisina amin’ny zavatra tsara ka nasiana ‘carreaux’ ny fanambanin’ny box iasanay. Nasiana lakile ihany koa ny varavarana tsy misy hidiny. Nolokoina ihany koa ny varavarana izay efa harefesina mba hiarovana azy. Efa nampahafantatra ny ambaratongam-pahefana tomponandraikitra manana fahefana feno amin’izany izahay amin’ny fanatsarana ataonay ary efa nahazo fankatoavana. Fanajana ny bokin’andraikitra hanome ny tolotra tsara indrindra homena ny mpanjifa.
Manao antso avo amin’ny tomlponandraikitra izy ireo hijerena ny marimaritra iraisana. Raha tsy misy izany dia hihenjana kokoa ny fitakiana.